राष्ट्रपतिले युएईमा कामदारप्रति देखाउनु भएको माया – Rastriyapatrika
राष्ट्रपतिले युएईमा कामदारप्रति देखाउनु भएको माया
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो हप्ता युएईको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो । आबुधाबीका युवराज तथा सशस्त्र बलका नायव सर्वोच्च कमाण्डर शेख महम्मद बिन जाहेद अल नेह्यानको बिशेष नीमन्त्रणामा उहां युएई आउनु भएको थियो ।
युएईमा उहाँले उच्चस्तरीय भेटघाट तथा छलफल गर्नुभयो । दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध, आपसी सहयोग तथा अन्य विषयमा छलफल भएका कुरा संचार माध्यममा आइरहे । राष्ट्रपतिको युएई भ्रमणलाई यहाँ कार्यरत नेपालीहरुले अझै चासोका साथ हेरिरहेका थिए ।
सामाजिक सन्जालमा देश घुम्न मात्रै आएको कि कुनै नेपाली कार्यरत रहेको कम्पनीका क्याम्पसम्म पनि जानुहुन्छ ? भन्दै टिप्पणी पनि भए । टिप्पणी स्वभाविक होला । तर कतिपय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले भने छुद्र भाषामा अभिव्यक्ति दिईरहेका देखिन्थे ।
हो, राष्ट्रप्रमुखले क्याम्पमा रहेका नेपाली कामदारलाई भेट्नु भावनात्मक हिसाबले राम्रै होला तर व्यावहारिक हिसाबले सजिलै सम्भव हुने कुरा होइन । फेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रोटोकल प्रकृया पनि त अलग हुन्छन ।
राष्ट्रपति आलङकारिक र प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको हाम्रो व्यवस्थामा आम नागरिकले उठाएको मजदुर क्याम्पसम्म राष्ट्रपति भन्ने बिषय सहज र सम्भव बिषय होइन । महत्वपूर्ण बिषय तपाईं हामी कामका लागि आएका नेपालीका बिषय र समस्यामा छलफल भए कि भएनन भन्ने हो । एजेण्डा उठे कि उठेनन भन्ने हो ।
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी युएई आएको दोस्रो दिन आबुधाबीमा उच्च स्तरीय भेटघाटमा व्यस्त रहनुभयो । भ्रमणकै समय उहाँ आबुधाबीमै रहेको लुभ्र संग्रालय पुग्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारी लुभ्र अबुधावी पुग्दा यहाँका निर्देशक म्यानुएल राबातले स्वागत गरेका थिए । लुभ्र अबुधावी कला तथा सभ्यताको संग्रहालय हो । यस संग्रहालयको उद्घाटन गएको साता मात्रै भएको हो ।
यो अरब प्रायद्वीपको सबैभन्दा ठूलो संग्रहालय पनि हो । यो सङग्राहलयको सुरक्षा र सरसफाइमा सयौं नेपाली कार्यरत छन् । विश्व चर्चित सङ्ग्राहलयको अवलोकन गर्ने क्रममा आफ्नै देशका नागरिक कामदारको रुपमा खटिएको देखेर राष्ट्रपती भण्डारीले उनीहरुलाई भेट्ने र कुरा गर्ने इच्दा राख्नुभयो । तर सुरक्षाका कारण भेट्ने व्यवस्था मिलाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणको व्यवस्थापन तथा त्यसमा खटिने अधिकारीहरुको प्रयासले मात्रै कामदारसँग भेट्न नसकिने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आफै प्रयास गर्नुभयो । आफुले कामदार भेट्ने विषयमा उहाँले युएईका सुरक्षा निकायलाई भनेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारसँग भेट भयो । भेटेर केही समय कामदारका कुरा सुन्नुभयो । आफू कार्यरत स्थानमै आफ्नो देशको राष्ट्रप्रमुख देख्दा सबै जना हौसिएका थिए ।
त्यहाँ मिडिल इष्ट सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र एमएबी क्लिनिङ कम्पनी मार्फत संग्रहालयमा सरसफाइ गर्ने कामदारहरु जम्मा भएका थिए । उनीहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले उभिएर कुरा गर्नुभयो । काम कस्तो छ ? समस्या के के छन ? तपाईंहरुका मात्रै होइन तपाईंका साथीहरु लगयात यहाँ काम गर्ने अरु नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? भनेर राष्ट्रपतिले सोध्नुभयो ।
तपाईहरुलाई गाह्रो साह्रो पर्दा सम्झिने नेपाली दूतावास नजिकै छ, कार्यबहाक राजदूत ज्यू यहीँ हुनुहुन्छु कार्यबहाक राजदूत नेत्रबहादुर टन्डनलाई देखाउँदैु राष्ट्रपतिले भन्नुभयो । त्यसो भन्दै गर्दा त्यहाँ कार्यरत नेपालीले आफ्नै आमा आएको जस्तै महसुस भएको बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले समय लिएर भेटेको बिषयमा कामदारका क्याम्पमा अहिले पनि चर्चा भईरहेको छ । राष्ट्रपतिले कामदारप्रति देखाएको मायाका बारेमा युएइका सरकारका उच्च अधिकारीहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको सम्मानमा यहाँका नेपालीसँग नेपाली दुतावास आबुधाबीले बुधवार साँझ रात्रीभोजको आयोजना गरेको थियो । युएईमा कार्यरत दुई लाख भन्दा धेरै नेपालीलाई एकै ठाउँमा भेला गराउन सम्भव थिएन् ।
केही संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर दुतावासले कार्यक्रम गर्‍यो । कार्यक्रममा पुग्ने दुई चार जना ब्यवसायी भएपनि धेरै भने यहाँ कामदार भिसामै रहेका नेपाली थिए । सुटबुट लगाएका, दौरा सुरुवालमा सजिनेहरुलाई मात्रै बोलाएर कार्यक्रम गरिएको भन्ने टीप्पणी पनि भए । कतिपय बोलाएर गए कतिपय कार्यक्रम बारे थाहा पाएर आफैं उपस्थित भए ।
यहाँ सक्रिय धेरै जसो पत्रकारलाई पनि दूतावासले बोलाएको थिएन । नबोलाए पनि रात्रीभोज नगर्ने भन्दै पत्रकारहरु पुगेका थिए । दूतावासले निमन्त्रणा गरेकाहरु कडा सुरक्षा चेकजाँचपछि मात्रै कार्यक्रम स्थल प्रवेश पाएका थिए । विमान्स्थलको जस्तै कडा जाँच गरेर प्रवेश दिइएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले उपस्थित सबै समक्ष पुगेर भलाकुसारी गर्नुभयो । सबैले छोट्टो समयमा प्रतिनिधित्व मुलक आफ्ना धेरै कुरा सुनाए ।